पोखरामा पहिलो पटक शिक्षक फुटसल टुर्नामेन्ट हुने | Jukson
पोखरामा पहिलो पटक शिक्षक फुटसल टुर्नामेन्ट हुने
पोखरामा पहिलो पटक अन्तर विद्यालय स्तरिय शिक्षक फुटसल टुर्नामेन्ट प्रतियोगिता हुने भएको छ । विद्यालयमा अध्यापन गराउने शिक्षकहरु माझ सुमधुर एकताकोे मुल उद्देश्यका साथ सगरमाथा स्कुलमा उक्त टुर्नामेन्ट हुन लागेको हो ।
प्रतियोगिता असोज ५ र ६ गते बि फिट फुटसल मैदान, गणेश टोलमा हु“दै छ । पहिलो पटक हुन लागेको सो खेलको विजेताले रु. १५ हजार रुपैंया तथा ट्रफि मेडल प्राप्त गर्ने छन् भने प्रतियोगिताको उपविजेताले रु. १० हजार रुपैया सहित ट्रफि मेडल प्राप्त गर्ने छन् ।
उक्त प्रतियोगिताको टिम दर्ता रकम रु. ३ हजार राखिएको छ ।
१८ वर्षमुनिको साफ च्याम्पियनसिप फुटबलका लागि नेपाली टोली भुटान जाँदै
त्रि–शक्ति सेभेन ए साइड, फुटबल प्रतितियोतिा हुने
पारिश्रमिकमा साम्राज्ञी पूजाको प्रतिस्पर्धा:कस्को कति हेर्नुहोस् ?
चर्च ब्वाइज गोल्डकपको सेमिफाइनलमा प्रवेश